JIRAMA : JIro sy RAno MAmpijaly vahoaka ! – MyDago.com aime Madagascar
JIRAMA : JIro sy RAno MAmpijaly vahoaka !
Mbola misy sahy miteny ve ireo mpitondra FAT ireo fa mijery ny fiainam-bahoaka? mbola sahy hiteny ve Rajoelina fa izy no filohan’i Madagasikara? Mbola manaiky sy manompo an-dRajoelina sy ny forongony ve ny vahoka « keliny » tetsy amin’ny 13 mai? Mbola sahy hanao famoretana ny vahoaka ihany ve ny « begalona ? Izany fanontaniana izany no mby ao an-tsaina manoloana ny TSY FAHOMBIAZA-n’ny milaza ho mpitondra ankehitriny.
Laniana hamahanana ny CT sy CST sy hiliban’ny mpanao politika ny « volam-bahoaka » nomena hotantanin’ny Fanjakana.Tsy alefa amin’ny tokony ho izy izany dia ny vahoaka efa tsy manan-kohanina no mbola miaina anatin’ny haizina noho ny afitsoky ny Jirama.Nambara fa noho ny tsy fahampian’ny rotsak’orana no mahatonga ny delestazy lavareny, vaky ambatolampy ihany omaly, nambaran’i Elyséé Ratsiraka io, fa hay tsy manam-bola ny FAT.Fa nankaiza ary ny vola ? Mitadiava vahaolana hainga ianareo fa mampijaly vahoaka.Izao tokoa ve ilay FIOVANA noresahana teny an-dalam-be?
Lanin’ny saka ny hena teny an-tanana e !
11 réflexions sur « JIRAMA : JIro sy RAno MAmpijaly vahoaka ! »
Marina daholo izany éé.. lanin’ny saka ny hena teny an-tànany é
Mampalahelo woa fa toy izao ny zavatra miseho eto Antananarivo noho i DITA TGV, mbola santionany ihany ireo fa ao koa ireo izay miseho any aminy faritany. Ekena fa misy tranga haotrizao eranizao tontolo izao fa ity eto aminintsika ity dia efa be loatra, zao indray moa ity lazainy ilay TGV avy any Miarinarivo hoe: avy aminy mouvance RAVALOMANANA daholo hono no mahatonga anizao sakana izao, ary mbola milaza koa izy araka ny teny mena sofina manao PANIER à CRABES koa hono ny opposition.Ry zareo ireo mihitsy zao no tena panier à FOZA, ao dia samy mifamely ao anatiny ao.Manarakizany fa angaha woa ity DITA TGV ity dia voafidy ny vahoaka no i leiry no mitady hanapaka izay tiany, raha aminy tena izy tokony hanana ny HAZODAMOSINY koa i OMER ary izay no maha praiminisitra azy fa tsy à GAUCHE dia à GAUCHE na koa à DROITE dia à DROITE, koa aoka re tsy ho rebirebena ny MOUVANCE RAVALOMANANA sy ny VAHOAKA mandady HARONA, be zay zavatra tsy nety nataonao zay ry BOAY KELY marary saina.Mba jerevo etsy ambany kely ny zavatra miseho eto Antananarivo isandro ny aminy maha DITA TGV anao:
Mahamasina : Ravan’ny polisy ny « bande des 5 » mpangalatra fiara sy moto
Anosibe : Mpivarotra sy mpifoka rongony tra-tehaky ny polisy
Andavamamba : Polisy notafihin’ny jiolahy tao an-tranony
Ampasika : Naolana, novonoina ary nariana ny fatiny
Andranomanalina : Fito lahy nisaron-tava nanafika trano telo
Ankazomanga : Un homme armé d’un sabre arrêté par le GIR
Affaire Cem : Quatre personnes devant le juge
Kidnapping tany Fianarantsoa : Migadra 4 taona avy ireo nahavita izany
Ary mihetsika izany polisy izany an! mahafinaritra fa mbola tsy ampy ny ezaka e!
tokony ho foanana oah ity zandary zandary ity fa sy mamely sady ireo no tena
tompon’ny dahalo sy lehibean’ny haratsiana rehetra @ tanana ,sady mpamono no mpandroba no MPANAKAN-DALANA.
Dia hita ao @ zandary ao daholo ny haratsiana rehetra,jereo ry JAFERA be ??DEVOLY latsaka an-tany ary mitonon-tena
mihintsy ny anao lahy ary dia tsy navelany moa raha tsy maty ilay PASITERA nifamaly taminy .
Jereo ny Rainoboto tsy manana Zandarme mandeha tsara ny fiainany ,io mbola avy @ la frantsa t@ fanjanahana ihany.
taiza Rasamy no efa nahita foza hanan-tsiny ???mandeha daholo ny azy fa ny hafa foana no diso.
Rehefa tsy manaiky na MIANKOHOKA @ devoliny ianao dia diso, izy no efa handevozin’ny fanahy
ratsiny any dia ianao koa no TERENY HANARAKA sy HANAIKY ny asa ratsiny REHETRA, ohatry ny hoe: NIARAHANA NITAVANA
angaha ireto HALATRA sy FANDROBANA ka tsy maintsy terena ny olona HANOHANA ny HEVIPETSINY,izy mianakavy no mahazo
tombotsoa @ asa MALOTO rehetra hataony ao dia ianao no TERENY HIBABY ny VOKANY, ka rehefa tsy manao izany ianao aminy
dia ianao no DISO! fa alikalahin’ireo angaha ny vahoaka ????izay HIRAKY ny SATANA ireo no haniraka antsika??? SANATRIA!!!
tsy misy miray tsikombakomba @ ratsin’ireo mihintsy eo fa efa ampy ny nandeferana teo aza NANENENANA fa hatao ahoana moa
fa » rano raraka iny »( hoy ilay namana teto izay ).
Tsy dita fa SAMPY sisa mihazona an’i domelina eo, aoka hazava tsara fa MPANOMPISAMPY io ary dia izy MIZIRIZIRY mafy fa tena
miantehitra mafy ny sampiny Lery.
JIRAMA reraka, AIR MAD reraka, STIMAD reraka COLAS velona: ny antsika reraka hatramin’io TGVendrana io no teo, ny an-dry menasofina velona satria mbola ampiantsika indray.Dia mbola misy ihany ny manohana an’io.
Hoy Ranavalona : »Ary mihetsika izany polisy izany an! mahafinaritra »
Indrisy diso hevitra ianao Ranavalona ! Ao ny tena voasambotra, fa ao koa ny mody voasambotra, izany hoe ireo mahafantatra olona mahitahita dia ny ampitso dia miverina any an-trano raha ela !
Tany Morondav nisy olona voasambotra nagalatra 385.000.000…..ariary. Nogadraina dia ny nahagaga dia izao :
– Telo andro tao aoriana ny nisamborana azy dia efa natao ny fitsaràna ary………nivoaka soa amantsara izy, tsy misy olana. Inona no vokany ? Tsy nisy olona nahasahy nadrebireby azy intsony tao Morondava satria sao hifoteran’ny rambony.
Izany koa ny Justice malagasy. Azo vidiana ary mifidy tarehin’olona !
Momba ireo marary ao amin’ny Hopital moa dia aoka fotsinyfa raha mahavita tsolotra ireo mpamafa trano sy infirmier sy Dokotera ianao, dia mandeha ho azy ny fitsaboana, fa raha tsy izany, na ho faty eo aza ianao, tsy olana aminy.
Inona no lazaina ny malagsy hoy ianao amin’izao fotoana ?
Lazain’ny sefo ao fa hoe tsy ampy intsony ny rano sy lasantsy andefasana ny machine ka dia voatery manao delestage.Inona no havalinao ???
– Ny Facture mandeha ihany anefa na tsy afaka mandefa jiro aza ianao ! Halatra be vava anie no ataony amin’ny vahoaka e ! Mba hevero fotsiny ny vola miditra aminy raha vao misy delestage. Manginy fotsiny, ny TVn’olona voan’ny surtension, sy ny fitaovana ao an-trano rehetra.
Ry menasofina anie no VELOMINA e!dia hoy fotsiny ry foza mantsy ny vahoaka
hoe: » koa raha tsy ianareo no velomina koh! »
Ny tena mampalahelo fa ny tokatrano tsy ahaaka fa » tsy misy mba milaza izany ao aminay satria nahoana hoy Njara???
tsy ry zareo no mandoha ilay vola fa izaho.tsy misy fitarainana tonga mihintsy aty amiko fa Facture ihany na ohatrinona na
ohatrinona dia gaga aho izao mahita ireto vao2 momba ny JIRAMA eto.Tsy haiko maninona ?????
Dia ao @ hopitaly indray efa tsy lazaina intsony , ny aza marary ihany!!ny fitsarana moa t@ andron’i dada ihany no mba nadio
izay nazahoany tsiny aza satria tratra daholo ny maloto nafenina sady nanontoina ny TOMBOTSOAN’ny hafa.
Vavakisoa misy sira io ka asakasak’izay te-hinana azy!
20 novembre 2011 à 22 h 02 min
Dia mbola tsy ihetsika ihany ve isika amin’izao mahazo antsika izao? Ny vahaolana dia ny miady izao fa tsy mihenoheno intsony…Efa tena tsy rariny intsony e. Arodany any izao fitondrana izao fa tsy lasa intsony
20 novembre 2011 à 22 h 58 min
Hietsika isika fa ahoana no tsy hietsika e! efa eo ampanomanana mihintsy izao
fa ilay hitarika sisa endrasana dia i Rakotoamboho sy Naika ary BERIZIKY dia
lasa izao!!saingy mbola vao vinavina io aloha ka asa raha hisy hanaraka fa hevitra sady mahaomby io no
mino aho fa ahazo olona.K ‘ aiza moa no handeha ny raharaha ray olona fa VEHIVAVY ( ramatoa aza an!)
no efa saiky tsy tana andeha hitarika ny OLONA HIVOAKA ny MAGRO teo ,vao hoe tsy nahaomby ilay fizaran-tseza
?tena mampalahelo ray olona fa izany no zavamisy.
Précédent Article précédent : Aucun partage du pouvoir, tout le monde est à bout de souffle !
Suivant Article suivant : TIM Atsimondrano : ny fodian’ny filoha Ravalomanana no tanjona!